चीनमा बसोबासरत महिलाहरूको महिला मञ्च गठन - China Radio International
चीनमा बसोबासरत महिलाहरूको महिला मञ्च गठन
(GMT+08:00) 2019-06-11 14:34:19
गैर आवासीय नेपाली संघ चीनमा नौ सदस्यीय महिला फोरम गठन भएको छ। संस्थाकी महिला संयोजक रञ्जिता आचार्यको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय महिला फोरम गठन गरिएको हो। गैर आवासीय नेपाली संघ चीनका अध्यक्ष एवं महिला फोरम गठन समारोहका प्रमुख अतिथि सुदेश कुमार झाले सबै सदस्यहरुलाई मनोनयन गर्नुभएको हो।
कार्यक्रममा गैर आवासीय नेपाली संघ हङ्गकङ्ग अध्यक्ष टिका गुरुङ, गैरआवासीय नेपाली संघ मकाउ अध्यक्ष शान्ति देवी अधिकारी एवं ग्वान्जौ स्थित नेपाली महाबाणिज्य दूतावासबाट रक्षा पोखरेलको समेत उपस्थिति थियो।
नागरिकन्यूज डटकमका अनुसार संयोजक आचार्यले 'परिवर्तनका लागि संगठित महिला' भन्ने नाराका साथ समिति गठन भएको बताउनुभयो। उहाँले चीनमा भएका नेपाली महिलाहरुलाई एकजुट बनाएर नेपालमा लगानी र उद्यमशिलताको लागि उत्प्रेरणा गर्ने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा गैर आवासीय नेपाली संघ चीनका अध्यक्ष सुदेश कुमार झाले गैर आवासीय नेपाली संघ चीनले नेपालमा विविध क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको बताउनुभयो। आङ्ग खस्ने समस्या समाधानको लागि कार्यक्रमहरु संचालन गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो।नव गठित फोरमको संयोजकमा रन्जिता आचार्य, सदस्यहरुमा सविता वर्तौला, रश्मी झा, मनिषा शर्मा, जुना ज्ञवाली,डा. करुणा राई, डा. कृषिता राजलावत, रक्षा संग्रौला, सेरिका सापकोटा कंडेल रहेका छन्। यस्तै सल्लाहकारमा अमृता थापा (कञ्चन) र खुश्बु अग्रवाल छन्।